Lanyard & Amachaphaza amnyama |
Epaulets ezahlukeneyo zoMkhosi
I-Epaulet sisiqwenga segxalaba sokuhombisa okanye umhombiso osetyenzisiweyo njengakwiimpawu okanye ubekwe emkhosini wenqwelomoya, imikhosi yomkhosi kunye neminye imibutho. Izipho eziMnandi eziMenyezelayo zivelisa i-epaulets ze-PVC ezihonjisiweyo, ezibunjiweyo okanye ezibhalwe embossed kunye namanqaku egxalaba ngenkxaso eyahlukeneyo kukhetho lwabathengi. Kwi ...
Iipatches ezilukiweyo eziqhelekileyo kunye neelebheli
Amabala amdaka kunye neelebheli kusoloko kungoyena mthengisi wethu ugqibeleleyo kunye nemveliso egqibeleleyo ngokusetyenziswa kwayo kunye noyilo lwefashoni. Zixhaphake kakhulu kwaye zinokusetyenziswa kwiingxowa, izihlangu, iminqwazi, iithoyi, iimoto, ifanitshala kunye nesambatho kubandakanya iimpahla zangaphandle, iimpahla zangaphantsi njalo njalo. Enye yemo ...
Umgangatho oqhelekileyo wenziwe ngeLanyard
Umtya kunye nemisila yenkomo zixhaphake kakhulu kubomi bethu bemihla ngemihla, ezinje ngeentambo zentamo zabasebenzi baseofisini, umfundi wesikolo kunye ne-ID yenkomo kwimiboniso yorhwebo, umtya wempahla, iribhoni yemedali, inja kunye neekhola, umtya omfutshane ngekhabhathi, umtya wefowuni, umtya wekhamera, umtya weglasi, itsha ...
Inja eqinileyo kunye neekhola
Izinja zezona zihlobo zithembekileyo zabantu kwaye kule mihla iintsapho ezininzi zinenja enye ubuncinci. Kumniniinja omtsha, kufuneka ukuba kubandakanya ukutya kwenja, ibhedi entofontofo, emva koko ilash. Kungakhathaliseki ukuba ubudala okanye ubungakanani benja yakho, ukuhamba kwezilwanyana kubalulekile. Ke ngoko ...
Imisila yenkomo ekumgangatho ophezulu kufuneka ibe yeyona nto iphambili kuwe ukubonisa iibheji, amatikiti okanye amakhadi e-ID kwimisitho, emsebenzini nakwimibutho, kwaye yenye yezona zinto zentengiso zihamba phambili kwihlabathi liphela. Imisila yenkomo inokusetyenziswa kwizicelo ezininzi ezinje ngesongo, ibhotile ...
I-Disney evunyelweyo yokuFekethisa iPatch
Ngendlela (ethandwa kakhulu) kude nokusetyenziswa kwefashoni okukhawulezayo, ibango lezinto ezizodwa kunye nezentsusa lonyukile. Ngamanye amaxesha, xa ubona amabala amahle okuhombisa amalaphu, kuya kufuneka umangaliswe bubugcisa bayo obuyinkimbinkimbi. Singumvelisi wakho ...